Rosia · Jona, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Jona, 2017
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Jona, 2017
Shina : Miteraka “Fihazàna Trozona” Ny Saritaka Avy Amin'ilay Lalao Rosiana Famonoantena Amin'ny Aterineto
Tohizan'ireo mpomba ny governemanta ny fanentanana amin'ny fanakànana ilay lalao , ary efa lasa lavitra ny sivana amin'ny aterineto.
Fahalalahàna miteny 27 Jona 2017
Fahalalahàna miteny 20 Jona 2017
Fanoherana 15 Jona 2017
Ny alina mialoha ny hetsi-panoherana miady amin'ny kolikoly manerana ny firenena , niditra an-tsokosoko tao amin'ny tranonkalan'ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna ao amin'ny faritra Yaroslavl ny mpisovoka ary nandefa hafatra.
Fanampenam-bava 13 Jona 2017
Nampiditra lalàna manafoana ilay antsoina hoe ny "Lisitry ny Bilaogera" izay noforonina tamin'ny taona 2014, mikasika ireo bilaogera malaza miaraka amin'ny lalàna manokana ny mpanao lalàna Rosiana ao amin'ny Duma.
Fanampenam-bava 09 Jona 2017
Nankatoavin'ilay Kaomity momba ny Fampitàmbaovao sy ny Teknolojia ao amin'ny Domà ny volavolan-dalàna iray niteraka resabe izay mety handràra ny tsy fitononana anarana amin'ireo fandefasana hafatra ety anaty aterineto. Isisihan'ilay kaomity ao amin'ny Domà ny handinihana ilay volavolan-dalàna amin'ny famakiana azy voalohany
Fanampenam-bava 07 Jona 2017